မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား
Japanese Speaking Project Manager
ရန်ကုန် | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MMK 1,000,000 - 1,500,000
Urgently hiring Japanese Speaking Project Manager.
Marketing Executive - (Mandalay) - Female (3) –Posts
မန္တလေး | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MMK Less than 100,000
2 year's experience in related fie;ld.
We are looking for General Manager position if you are interested please apply for this position.
Admin Assistant (1)Post
ရန်ကုန် | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MMK 100,000 - 200,000
We are looking for Admin Assistant position if you are interested please apply for this position.
Office staff - Male or Female
Khine Myaee Khine Co,Ltd
နိုင်ငံခြား | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | $ လျှို့၀ှက်အပ်သော
လွန်ခဲ့သော2ပတ် က
- Must be able to live in Hpa- am . - Must understand how to manage accounting and agriculture knowleges .
ရန်ကုန် | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MMK Less than 100,000
Accountant (Female-1 post) For Mandalay
မန္တလေး | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MMK 200,000 - 400,000
We are looking for Accountant position if you are interested please apply for this position.
Digital Marketing Graphic Designer –(Mandalay) Male (2) Posts
CRM -Customer Relationship Management- (Mandalay) Female (1) Post
2 year's experience in related field.
Office Staff - Bayint Naung (Ygn) –Male (3), Female (3)
1 year experience in related field.
Warehouse Assistant – (Mandalay) – Male (5), Female (2)
Warehouse Assistant – Bayint Naung (Ygn) – Male (5), Female (2)
စိုက်ပျိုးရေး ကြီးကြပ်ရေးမှူး Male (2) Posts
ဒေသအလိုက်၊ သီးပင်၊စားပင်၊နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းများကို အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်ရန်
စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ 1 စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူ‌ရေးအလုပ်အကိုင်များ2ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ2ဖန်တီးမှုပိုင်းနှင့် ဒီဇိုင်းပိုင်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1 ဖောက်သည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1 ရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များ 1 အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ6အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 3
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း 17
မန္တလေး9ရန်ကုန်5မြန်မာပြည်အတွင်း2နိုင်ငံခြား 1
Expats Preferred 12